Mario Gomez oo Dil Ugu Soo Laabtay Horyaalka Bundeslisgaha ….Bayern….. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Mario Gomez oo Dil Ugu Soo Laabtay Horyaalka Bundeslisgaha ….Bayern…..
Mario Gomez oo Dil Ugu Soo Laabtay Horyaalka Bundeslisgaha ….Bayern…..
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 18-08-16 9:40 AM Mario Gomez ayaa dib ugu laabtay horyaalka dalkiisa hooyo ee Bundesliga kadib markii uu katagay kooxda Besiktas oo uu amaah ugu ciyaarayay xiliciyaareedkii hore.
Kooxda ka ciyaarta horyaalka dalka Germany ee Wolfsburg ayaa shaacisay inay la soo wareegtay weerar yahankii hore ee Bayern Munich ee Mario Gomez.
Wolfsburg ayaa kula soo wareegtay Mario Gomez aduun dhan 7 milyan oo euro, wuxuuna sheegay inuu ku faraxsanyahay ku biiridiisa Wolfsburg.
Weeraryahanka heerka caalami ee Deutschland Mario Gomez ayaa katagay kooxda Fiorentina xaggaagii hore markaas oo uu amaah ugu biiray kooxda Beskitas ee dalka Turkiga, qalalaasihii siyaasadeed ee ka dhacay halkaas ayaana ku qasbay inuu dib ugu soo laabto dalkiisa.
Ka dib markii uu dalkiisa hooyo dib ugu soo laabtay ayaa laga hayaa “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dib ugu soo laabto Bundesliga” ayuu sii raaciyay weerar yahankii hore ee kooxda Bayern Munich kaas oo lambarka 33 u xiran doona kooxdiisa cusub.